2021 MA No Rx Plan (HMO) - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Qorshayaasha Medicare Advantage Plans > Dhamaan Qorshayaasha Medicare ee 2021 > 2021 MA Qorshaha Rx (HMO)
Qorshahan $ 0 wuxuu ku siinayaa caymis dheeri ah oo kharash la'aan ah.
Qorshahan caadiga ahi wuxuu bixiyaa caymis sare oo Medicare ah kharash la'aanna bil kasta ah.
Fadlan ogow: qorshahan ma bixinayo caymiska dawada ee dhakhtar qoray. Haddii aadan u baahnayn caymiska daawada laguu qoray laakiin aad rabto caymis ilkaha iyo aragga, qorshahan ayaa adiga kuu noqon kara. Qorshahani waa xulasho weyn oo loogu talagalay shakhsiyaadka haysta caymiska dawada dhakhtarku qoro ee loo maro VA.
Caafimaadka, Ilkaha, Aragtida, Barnaamijka Jimicsiga, iyo inbadan.
Farmashiyaha Aan Daboolin Aan Daboolin
ilkaha $ 0 bixin, xaddid la'aan adeegyada kahortagga. Ilaa $ 500 xadka faa'iidada dheeriga ah sanadkiiba. Aan Daboolin
Soo Degso Faa'iidooyinka oo Kooban
Caymiska dawada dhakhtarku qoro kuma jiro qorshahan.